Semalt विशेषज्ञ कसरी स्क्रिन Scrapers संग काम गर्ने व्याख्या गर्दछ
स्क्रिन स्क्रेपरहरू डाटा खनन उपकरणहरू हुन् जसले साइटहरूबाट डाटा निकाल्छ र प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि ढाँचामा प्रदान गर्दछ। डाटा ढाँचा API, CSV, MySQL, MS SQL, पहुँच र, एक्सेल हुन सक्छ। स्क्रिन स्क्र्यापर्सका लागि धेरै पर्यायवाची शब्दहरू छन्, वेबसाइट रिपर्स, एचटीएमएल स्क्र्यापर्स, स्वचालित डेटा स data्कलनकर्ताहरू र वेब एक्स्ट्रक्टरहरू सहित।
विगतमा, व्यक्तिहरू मेनफ्रेम कम्प्युटरहरूमा काम गर्थे। तिनीहरूले महत्त्वपूर्ण व्यापार जानकारीको साथ काम गर्नको लागि पाठमा आधारित वा हरियो स्क्रिन इन्टरफेस प्रयोग गर्नुपर्‍यो। र तिनीहरूले कम्प्युटर टर्मिनल स्क्रिनबाट पाठ पढ्न स्क्रिन स्क्र्यापिंग प्रयोग गरे। आज, जबकि स्क्रिन स्क्र्यापिंगले अन्य उद्देश्यका लागि यसको प्रयोग गर्नको लागि वेबसाइटहरूबाट डाटा प्राप्त गर्न स .्केत गर्दछ। स्क्रिन स्क्र्यापर्सहरूले वेबमा बहुविध साइटहरूबाट डाटालाई क्रल गर्न सक्दछ डाटा आवश्यक पर्ने भेला गर्न।
त्यसो भए कसरी स्क्रिन स्क्र्यापरले काम गर्दछ? स्क्रिन स्क्र्यापरलाई खोज ईन्जिन क्रोलर वा माकुरासँग तुलना गर्न सकिन्छ। यी क्रलरहरूले लाखौं साइटहरू पहुँच गर्दछ, जसमा बहुविध वेबपृष्ठहरू छन्। माकुरो व्यवस्थित ढ cra्गले क्रल हुन्छ वा यो पृष्ठहरु को माध्यम बाट स्क्यान गर्दछ र स index्ग्रहण गरिएको डाटालाई खोजी गरिरहेको छ। स collected्कलन र अनुक्रमित डाटा खोजी इन्जिन परिणामहरूको रूपमा अन्त इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा प्रस्तुत गरिन्छ। यस्तो डाटा सामान्यतया संगठित तरिकामा प्रस्तुत गरिन्छ, विशेष गरी मानव प्रयोगको लागि अनुरूप।
त्यो भनेकोसँग, स्क्रिन स्क्र्यापरले साइटको कोड मार्फत खोजी गर्नेछ र अनावश्यक कोड फिल्टर गर्दछ। त्यसकारण, स्क्रिन स्क्र्यापरको प्राथमिक कार्य उपयोगी डेटाको लागि खोजी गर्नु हो। यसले यो डाटा निकाल्छ र थप सुविधाहरू बिना यसलाई सरल डाटाबेसको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ।
स्क्रिन स्क्रेपर्स प्राय: उनीहरूको डाटा पहुँच गर्न साईटको HTML कोडि scलाई स्काउर गर्छन्। साथै, ती अन्य स्क्रिप्टि languages भाषाहरू जस्तै PHP वा जाभास्क्रिप्ट खोज्न सक्दछन्। खानीएको डाटा त्यस बिन्दुमा HTML को रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ताकि वेब प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना ब्राउजरहरूको साथ यसलाई पहुँच गर्न सक्दछन्। यो पाठ डेटाको रूपमा भण्डारण गर्न सकिन्छ।
स्क्रिन स्क्र्यापर्सका लागि बिभिन्न प्रयोगहरू छन्, तर अनिवार्य रूपमा स्क्रिन स्क्र्यापरको प्रयोग व्यवसायको साथ कुञ्जी शब्द-सम्बन्धित साइटहरूको दायराबाट तुलना डाटा, स्प्रेडशिट, चार्टहरू, र ग्राफहरू उत्पन्न गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ - प्रस्तुतीकरण वा रिपोर्टहरूमा प्रयोग गर्न। स्क्रिन स्क्र्यापिंग उपकरणहरूले समयको एक अंशमा वेबबाट ठूलो डाटा निकाल्ने गर्दछ किनभने यसले समयको एक अंशमा वेबबाट ठूलो डेटा निकाल्छ। समान कार्यभार प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिले प्रासंगिक वेबसाइटहरू खोज्नुपर्दछ, लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्, र प्रत्येक वेबपृष्ठ ब्राउज गर्नुपर्दछ उसलाई आवश्यक पर्ने जानकारी पाउन। यो अत्यन्त थकाउने र समय खपत हुने हुन सक्छ।
जबकि स्क्रिन स्क्र्यापर्स वेब सर्फरहरू र वेबमास्टरहरूको लागि आशिष् बन्न सक्छ, तिनीहरू स्वार्थी उद्देश्यहरूको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। व्यक्ति वा कम्पनीहरू जसले स्प्यामलाई उनीहरूको विज्ञापन प्रविधिको एकको रूपमा प्रयोग गर्छन्, उदाहरणका लागि, स्क्रिन स्क्र्यापर्सको फाइदा लिन साइटका ईमेल ठेगानाहरू अवैध रूपमा खान सक्दछ।
त्यहाँ अनुमति बिना अन्य व्यक्ति साइटहरू स्क्र्याप को कुनै कानुनी समस्या छ? स्क्रिन स्क्रेपर एक महत्त्वपूर्ण कम्प्युटर प्रोग्राम हो भन्ने तथ्यको बाबजुद पनि, यसलाई प्रयोग गर्दा कानूनी र नैतिकतालाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। स्क्रिन स्क्र्यापिंगको कानूनी र अवैधानिक रूपहरू छन्। अनुमति बिना कसैको वेबसाइटबाट डाटा निकाल्दा प्रतिलिपि अधिकारको उल्ल .्घन हुन सक्छ